Dowlada Mareykanka oo abaalmarin lacageed siin doonto qofkii soo sheega Hamza bin… – Hagaag.com
Dowlada Mareykanka oo abaalmarin lacageed siin doonto qofkii soo sheega Hamza bin…
Posted on 1 Maarso 2019 by Admin in World // 0 Comments
Dowladda Maraykanka ayaa soo bandhigtay abaalmarin maaliyadeed oo gaareysa hal million dollar qofkii soo gudbiya macluumaad lagu xirayo Hamza bin Laden oo ah wiilka aasaasihii al-Qaacida Osama bin Laden oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha muhiimka ah ee ururka.
Barnaamijka Abaalmarinta gaarka ee cadaalada ee arrimaha argagixisada ee wasaarada gaashandhigga Mareykanka ayaa ku tilmaantay wiilka bin Laden ee ugu yar inuu yahay “hogaamiye firircoon ee al-Qaacida”, wuxuu ku hanjabay inuu qaadi doono weerar ka dhan ah Mareykanka iyo xulufadiisa.
Warqadihii fariimaha ee laga helay gurigii Osama bin Laden ka degenaa Abbottabad ayaa cadeynaya sida ay soo weriyeen warbaahinta Mareykanka in loo diyaarinayey Hamza bin Laden inuu la wareego hogaanka al-Qaacida, sida uu xusay maamulka Mareykanka.
Hamza oo maamulka Mareykanka baadi goobaya ayaa da’diisa lagu qiyaasay 30 sano, waxaana xaas u ah gabar uu dhalay Mohammed Atta oo ka mid ahaa raggii fuliyey weerarkii 11 September 2001 ee lagu qaaday dalka Mareykanka.
Michael Ivanov, oo ah kaaliyaha Xoghayaha arrimaha dibada ee Mareykanka oo u qaabilsan arrimaha ammaanka diblumaasiyada ayaa wuxuu u badiyey in Hamza bin Laden uu ku sugan yahay xadka Pakistan iyo Aghanistan, wuxuu kaloo sheegay in Hamza laga yaabo inuu awooday inuu aado dalka Iiraan.
Hamza bin Laden ayaa wacad ku maray in la weerari doono Mareykanaka gudaha dhulkiisa, wuxuu ku hanjabay inuu u aar gudi doono aabihiis oo la dilay bishii May 2011 oo lagu dilay guri uu la deggenaa qoyskiisa magaalada Abbottabad oo u dhow magaalada Islamabad caasimada dalka Pakistan.
Waxa uu ku sheegay cod la duubay bartamaha sanadkii 2016k oo cinwaan uga dhigay “kuligeena waxaan nahay Osama””haddii aad moodeen fal dembiyeedkii foosha xumaa ee aad ka geysateen Abbottabad in ay mareyso xisaab la’aan, waad qaldan tihiin, xisaabta ayaa noqon doonta mid adag, annagu waxaanu nahay ummad aan ka seexan cadaalada”.
Wuxuu sidoo kale ku sheegay codka la duubay in ururka al-Qaacida ay sii wadi doonaan weerarada ay kaga jawaabayaan dulmiga aad kula kacdaan dalalka carabta iyo Muslimka, sida uu hadalka u dhigay.
“Waxaan sii wadi doonaa jihaadka dar Allah, wadadaas ayaan ku socon doonaa, waxaan wadi doonaa inaan idinku beegsano gudaha dalkiina iyo dibadaba annaga oo ka jawaabeyna dulmiga aad ku heysaan dadka reer Falastiin, Afghanistan, Suuriya, Ciraaq, Yemen iyo Somalia iyo dhammaan dalalka Islaamka ee aan ka badbaadin dulmigiina”,sidaasi ayuu yiri.